Qarax dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay Beledweyn. [Akhris …] – Radio Daljir
Qarax dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay Beledweyn. [Akhris …]
Beledweyn, June 18 – Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay in badan 20 kalana waa ay ku dhaawacan Qarax aad u xooggan oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan.
Goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxaa ku sugnaa mas’uuliyiin ka tirsan dawladda KMG ah Soomaaliya, mana cadda in ay ka bad-baadeen iyo in kale.
Qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana lala beegsatay hotelka lagu magacaabo Madiina, oo ay deggan-yiin mas’uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaaliya, kuwaasi oo uu ka mid yahay wasiirka amniga qaran Cumar Xaashi Aadan, safiirka Itoobiya u jooga Soomaaliya C/kariin Faarax (Laqanyo) guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabo-geed) iyo mas’uuliyiin kaleeto oo ay ka mid yihiin kuwa hadda gacanta ku haya maamulka gobolka iyo kan degmada Beledweyn.
Wararka qaar ayaa tilmaamaya mas’uuliyiin uu ka mid yahay wasiirkii amniga qaran iyo safiirkii Itoobiya ee Soomaaliya in qaraxaasi ku dhinteen, inkastoo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin.
Wixii ka soo kordha goor dhow ayaan idin soo gudbin doontaa.